Bundesligaha jarmalka oo dib u furmaya 16 ka may. - Somgoal
Home Wararka Maanta Bundesligaha jarmalka oo dib u furmaya 16 ka may.
Xiriirka kubada cagta jarmalka ayaa shaaciyay in dib u bilaabi doono horyaalka dalka jarmalka kadib markii la hakiyey caabuqa karoona owgii, xiriirka ayaa hakiyey dhamaan ciyaarihii dalka jarmalka kadib markuu sii balaartay fayraska karoona ayadoo dhamaan ciyaartowda iyo shaqaalaha kooxaha ee guryahooda lagu karantiilay.
War kasoo baxay dowlada jarmalka ayaa sheegayay in xiriirka kubada cagta jarmalka lasiiyay ogolaasho dib loogu bilaabayo horyaalka ayadoo ujeedada laga leeyahay tahay in lagu soo gabagabeeyo ilaa dhamaadka june horyaaka.
Waxaa jiro doono nidaam uu xiriirka soo saaray oo si taxadar ah loo ilaalin doono caafimaadka ciyaartoyda iyo shaqaalaha koox walbo ayadoo sii dheertahay dhamaan xeer ilaaliyaasha ciyaaraha iyo taagarayaasha kasoo qeybgali doono ciyaaraha, ciyaartoyda iyo maalmulka iyo garsooyaasha ayaa labaari doonaa isbuucii haljeer ama laba jeer.
Waxaa aad loo yareeyay inta garoonka imaan doonto inta uu socdo xili ciyaareedka ayadoo lagu soo koobay 300 qof oo ay ka mid noqon doonaan dhamaan ciyaatoyda shaqaalaha garsoorayaasha iyo taageerayaasha imaan doono.
Kulanka ugu horeeyo ayaa lagu waramayaa in uu noqon doono kulan derby ah oo dhexmari doono doono laba koox kala ah Schalke and Borussia Dortmund 16 ka may ayadoo lasii sheegay kulamada kale la ciyaari doono.
Kulamadaan la ciyaari doono ayaa waxaa si adag isha ugu haayo horyaalada kale ee yurub Premier League, La Ligaha Spain iyo Serie A da Talayaaniga ayadoo ku dhiira galin doonto in horyaalada kale ku daydaan.
Kulamada la ciyaari doono
Sabti 16 May
Axad 17 May
Isniin 18 May
Bundesligaha jarmalka oo dib u furmaya
Previous articleXarigga Ronaldinho iyo walaalkii
Next articleKooxaha Premier League oo isku khilaafsan bilaabashada horyaalka